Iinguqulelo ze-Android: iindaba, uhlaziyo, iibugs kunye nokunye | I-Androidsis
Sonke siyazi ukuba kukho okungapheliyo Iimpawu zokuSebenza, ukuba isoftwe esinceda ukuba senze ikhompyuter okanye isixhobo esiphathwayo ngaphandle kweengxaki. Singazifumana ezona zixhaphakileyo, ezinje ngeWindows, kodwa kukwakho nezinye ngamanye amaxesha ezingabonwa, njengoko bekunjalo ukuza kuthi ga ngoku. Android. Kule ndawo ungafumana yonke into enxulumene neenkqubo zokusebenza ezikhoyo ngoku, iingcebiso, ulwazi kunye nayo yonke into enento yokwenza nabo.
Qho ngonyaka, i-Android ikhupha ingxelo entsha enezinto ezininzi ezintsha kunye nophuculo. Sikuxelela konke malunga neenguqulelo zamva nje ze-Android, uhlaziyo kunye namahemuhemu okukhutshwa okuzayo.
Kwi-2018, yayiyiminyaka eli-10 okoko kwasungulwa i-Android kwintengiso. Inkqubo yokusebenza kaGoogle ibe nophuhliso olumangalisayo kule minyaka idlulileyo. Ngakumbi nangakumbi abavelisi basebenzisa le nkqubo yokusebenza, eyona isetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela, kwaye kule minyaka idlulileyo iinguqulelo ezahlukeneyo sele zikhutshiwe.
Ngenguqulelo nganye entsha ye-Android, amanqaku amatsha kunye nophuculo olukhulu luye kwinkqubo yokusebenza. Emva koko siza kuthetha ngezi nguqulelo, ukuze ufumane umbono ocacileyo wokuzivelela okuye kwakho kwiminyaka edlulileyo.
Ipie ye-Android 1.0
Inguqulelo yokuqala yenkqubo yokusebenza yaphehlelelwa ngokusesikweni ngoSeptemba 23, 2008. Ifowuni yokuqala ukuyisebenzisa yayiliHTC Dream. Inkqubo yokusebenza yayingafezekanga, kodwa ungabona umbono wento enokuba yiyo ngokuhamba kwexesha.
Eminye imisebenzi esele ikho namhlanje sele iqalile, njengokuvumelanisa ngeGmail, iiapp zikaGoogle ezinje ngeMaphu, Ikhalenda, Abafowunelwa, iYouTube okanye injini yokukhangela kuGoogle kwisikhangeli. Imakethi ye-Android (uguqulelo lokuqala lweVenkile yokuDlala kuGoogle) ikwenziwe yafumaneka kubasebenzisi. Nangona kwiinyanga zokuqala ungakhange uthenge iiapps.
Kuwo wonke u-2009 iinguqulelo ezongezelelweyo zaye zakhutshwa, iBanana Bread 1.1, Ikhekhe 1.5 kunye neDonut 1.6. Kuluhlu lweenguqulelo eziphakathi apho kwenziwa khona imisebenzi emitsha, ukongeza kuphuculo oluthile kwi-Android interface. Eyona nto ibaluleke kakhulu yayiyi-Android 1.6 IDonut, ephawula ukufika kwayo kuluntu ngokubanzi. I-HTC Magic yayiyifowuni engabalulekanga kweso sigaba.
I-Android 2.0 / 2.1 i-Eclair
Nge-26 ka-Okthobha ka-2009, inguqulelo yesibini yenkqubo yokusebenza yafika ngokusesikweni. Iindaba ezininzi zeza nayo, uninzi lwazo lusekhona nanamhlanje. Ukuhamba kwiimephu zikaGoogle kwaziswa, isikhangeli sahlaziywa ngokupheleleyo, kwaye iscreen sasekhaya sasenziwe ngokwezifiso.
Ukwaziswa kokuhamba kwemephu zikaGoogle yayiyinto ephambili ye-Android. Kuba i-smartphone nayo yaba sisixhobo esinokusetyenziswa ngabasebenzisi ukuziqhelanisa okanye ukucwangcisa iindlela. Umsebenzi ophambili kubasebenzisi. Enye yeefowuni ezisebenzise le nguqulo yale nkqubo yayiyi-Galaxy S. Isizukulwana sokuqala sesiphelo sangoku sophawu lwesiKorea.
I-Android 2.2 Froyo
Kwiinyanga nje ezimbalwa kamva, ngoMeyi 20, 2010, uFroyo wafika. Ngale ndlela, unokubona ukusebenza rhoqo kukaGoogle ukuphucula inkqubo yokusebenza kunye nemisebenzi emitsha kunye notshintsho kuyilo. Le nguqulo yenye yezo zafikelela kubaphulaphuli abaninzi nakwizigidi zabathengi ukunxibelelana kwabo okokuqala ne-Android.
Umhlanganisi weDalvik, imiyalelo yelizwi okanye ukuhambelana kweAdoble Flash zezona nguqu ziphambili zisishiyileyo le nguqulo intsha yenkqubo yokusebenza. Ngolu hlobo lwenkqubo, i-HTC Desire nayo yeza kwimarike. Ifowuni eyayonwabela ukuthandwa kakhulu phakathi kwabathengi.
I-Android 2.3 Isonka sejinja
Ekupheleni kuka-2010 sasinenguqulo entsha ye-Android kwintengiso. Ukuba abo bangaphambili bebesele bethathe amanyathelo amakhulu kwinkqubela phambili yabo kwimarike, kunokwenzeka ukuba lolu hlobo belululwandiso lwabo ngokuqinisekileyo. Yeyona nguqulelo icokiswe kunene yenkqubo, ngandlela zonke. Zombini ngokwendlela yoyilo kunye nemisebenzi.
Kuyo, inkxaso yee-sensors ezinjenge-gyroscope okanye i-barometer yafakwa okokuqala. Ukongeza, kwiifowuni ezininzi yayiyinguqulelo yokugqibela abayifumeneyo, kuba uGoogle waqala ukuyeka ukunika inkxaso. Kwakhona kubalulekile kuba kunye nayo, i-Samsung Galaxy Note yokuqala yafika kwimarike.
I-Android 3.0 Inyosi yobusi
Ngomhla ka-Matshi 2011, kwiinyanga nje ezintathu emva kwenguqulo yangaphambili, sinenguqulo entsha ye-Android esele ilungile. Ayilulo naluphi na uhlobo, kuba ifikile kwintengiso embindini wethebhulethi. Ngesi sizathu, ingxelo yenkqubo yokusebenza yaphuhliswa ekwahambelana neetafile.
Ngapha koko, le nguqulo 3.0 iyahambelana kuphela neetafile. Iphawule ukungena kweGoogle kweli candelo lentengiso. Yayiyinguqulelo eyilelwe ukuba isetyenziswe kwiscreen esikhudlwana, esinemisebenzi emitsha kunye neewijethi, kunye nemowudi eyahlukeneyo yokwenza izinto ezininzi. Kwakuyixesha lokwandiswa kwintengiso, apho uninzi lweemveliso zathatha umngcipheko kwiimodeli.
Kwiinyanga ezininzi kamva, ekupheleni kuka-2011, ngokukodwa ngo-Oktobha 12, 2011, inguqulelo ye-4.0 yenkqubo yokusebenza yasungulwa. Inguqulelo ye-Android ibizelwe ukudibanisa yonke into. Kuba yenziwe yafumaneka kuzo zombini iifowuni kunye neetafile. Iphawule ukuqala kwexesha elitsha lenkqubo yokusebenza.
Ngokubonakalayo yayilutshintsho olukhulu kuGoogle. Iimpawu ezinje ngokusetyenziswa kweewijethi ezitshixayo zesikrini, amaqhosha akwi-screen, kunye nokukwazi ukucoca izaziso ngokuthinta. Ikwaphawule ukufika kwe-Android Beam ngokusemthethweni kwintengiso. IMotorola yayiyeyona nto iphambili ngeli xesha, iimodeli ezinje ngeMoto RAZR.
I-Android 4.1 Jelly Bean
Inguqulelo elandelayo yenkqubo yokusebenza, ekhutshwe ngoJuni 2012, yayiyeyona idumileyo ukuza kuthi ga ngoku. Ukongeza ekubeni yenye yeenkampani eziye zabakho kwindawo yentengiso kwihlabathi liphela. Amava omsebenzisi atshintshe kakhulu, njengoko inkqubo ngoku iphendulile ngendlela engamanzi ngakumbi. Ukusetyenziswa kwakungcono kakhulu.
Imiyalelo yelizwi kunye nokufika kweGoogle ngoku yayizinto ezimbini ezibaluleke kakhulu kwi-Android Jelly Bean. Izaziso ziye zaphuculwa kwaye neProjter Butter nayo yafika, ebaluleke kakhulu kwinkqubo. I-Sony Xperia Z yayiyeyona nto iphambili ngeli xesha. Enkosi kwikhamera yayo ye-13 MP kwaye ungangeni manzi, enye yeefowuni zokuqala ze-Android malunga noku.
I-Android 4.4 KitKat
I-Android 4.4 KitKat yinguqulelo esathandwayo ngabasebenzisi abaninzi namhlanje. Ibeka iziseko zenkqubo yokusebenza namhlanje. UGoogle ubandakanye inani lobuchwephesha, obusekhona kwinkqubo yokusebenza namhlanje. Ukongeza, iphawule ukufika komyalelo ok kaGoogle.
Uyilo luqhubekile nendaleko yalo, lucocekile kwaye lukhululekile ekusebenziseni ujongano. Ukongeza, uphuculo lwenziwe ukuze iifowuni ezisezantsi zisebenze ngcono ngalo lonke ixesha. Ukurekhodwa kwesikrini kwakhona kwaziswa kwizixhobo.
I-Android 5.0 Lollipop
Yaziswa ngoNovemba 2014, yenye yeenguqulelo ezivelise uchulumanco olukhethekileyo phakathi kwabasebenzisi be-Android. Ayisiyonto imangalisayo, kuba yenye yezo zinto zisishiye neenguqu ezinkulu. Uyilo lweMathiriyeli lwenze ukungena kwalo ngale nguqulo yenkqubo yokusebenza. Yayilutshintsho lokuqala olukhulu ukusishiya kwakhe.
Ikwathetha ukufika kweeprosesa ezintsha ezingama-64, kuba i-Android ngoku yayibaxhasa. Inkxaso yeMultiscreen nayo yaziswa, iSmartlock yafikelela kwinkqubo yokusebenza kwaye ekugqibeleni, iProjekthi Volta yafika.
I-Android 6.0 Marshmallow
Ngo-Okthobha u-2015, ingxelo yesithandathu ye-Android yayisele ithengisiwe. Inguqulelo eqhubekayo, apho kwakucacile ukuba uGoogle sele enezimvo ezicace gca malunga nento abafuna ukuyiphumeza ngenkqubo yokusebenza. Kodwa, ukugcina imeko yokwazisa uphuculo olubalulekileyo kuyo.
Kule nguqulo, kwagqitywa ekubeni kuphuculwe esele ikhona kwi-Android. Kwakungekho lutshintsho lukhulu, kodwa zininzi izinto eziphuculweyo, ezazenzelwe ukunika ukusebenza okungcono. Ulawulo lwebhetri luphuculwe, iimvume zeapps ngoku ziyalawuleka, kwaye ukugcinwa okulungisekayo kwakulapha. Ikwazisa kwakhona ikhadi le-SD kwiifowuni ze-Android. UGoogle ngoku ukwazise kwi-Tap, ethi ngandlela thile yenze isiseko sokuba yeyiphi uMncedisi kaGoogle namhlanje.
Inguqulelo yamvanje, ebisetyenziswa kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo. Ukufika kwayo phantse kugutyungelwe kukusungulwa kweGoogle Pixel. Ukukhangelwa kwelizwi lelinye lamaqhosha kolu hlobo lwe-Android. Kwakhona useto lolwimi olukhawulezayo. Nangona owona msebenzi ulindelwe ngabaninzi yayiyeefestile ezininzi. Into esele ifikile kunye neNougat.
Njengohlobo lwangaphambili, uGoogle wayezinikele ekuqhubekeni ukuphucula uninzi lwezinto ezikhoyo kwinkqubo yokusebenza. Inkqubela phambili yayo yayihamba kancinci kwimarike, kodwa iyaziwa njengesithsaba njengenguqulo eshiye kunye nophuculo kunye namava omsebenzisi olungileyo.
I-Android 8.0 Oreo
Ikhutshwe ngo-Agasti 2017, le nguqulo ye-Android ibhekiswa kwabaninzi njengeyona ikrelekrele okwangoku. Umncedisi kaGoogle wadityaniswa kwi-Android, esenza ukuba icace gca ukuba ibisele iyinto ebalulekileyo kwisicwangciso senkampani yaseMelika. Ukuphumla, ukuphuculwa okuncinci kwakuza kwinkqubo.
Ukuphuculwa kokugqitywa kokuzenzekelayo, ukwaziswa kweMowudi yeFoto-eMfanekiso. Ukongeza kwii -apps ezikhawulezileyo, onokuzama ngaphandle kokuzifaka, into enokwenzeka kunye nemidlalo. Inguqulelo eza kukhatshwa sisizukulwana sesibini seGoogle Pixel. I-Pixel 2 XL ngokungathandabuzekiyo yenye yeemodeli ezigqibeleleyo kunye nezona ziphezulu zikhutshwe kwi-Android.
I-Android 9.0 Pie
Inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza ukuza kuthi ga ngoku, ekhutshwe ngo-Agasti 2018. Inguqulelo apho ubukrelekrele bokufakelwa bulapha ukuze buhlale kwi-Android. Yenzelwe ukuba abasebenzisi basebenzise inkqubo yokusebenza ngendlela entsha. Into ebonakaliswa kwizimbo zomzimba.
Uphuculo lwenziwe kulawulo lwebhetri, ukukhanya okuguqukayo. Ukongeza, sibona indlela inotshi eye yaba yinto eqhelekileyo phakathi kweefowuni. Into enyanzela inkqubo kunye neeapps ukuziqhelanisa noyilo olutsha kwii-smartphones ze-Android.
Uyifaka njani inyathelo le-beta ye-12 inyathelo ngenyathelo
por UDaniPlay yenzayo Iinyanga ze2 .
I-beta yokuqala ye-Android 12 sele ikunye nathi ngeendaba ezininzi ezimnandi, kubandakanya ukuyila kwakhona ...
I-Android 12 iveza uyilo olutsha kunye nokusebenza ngokutshintsha okumangalisayo
por UDaniPlay yenzayo Iinyanga ze3 .
Ngexesha likaGoogle I / O 2021, uGoogle uveze ingxelo elandelayo yenkqubo yokusebenza yeselfowuni, i-Android 12. Kwi…
I-Sony Xperia 1 kunye ne-Xperia 5 baqala ukufumana i-Android 11 ezinzileyo
por UDaniPlay yenzayo Iinyanga ze7 .
AbakwaSony baqinisekisile ukuba iiterminal zayo ezimbini zifumana ingxelo ezinzileyo ye-Android 11. NguSony ...
Iinguqulelo ezintsha ze-Android ziyaqhubeka nokuphucula inqanaba lokwamkelwa
I-Android ibisoloko ibonakaliswa kukuqhekeka, ngenxa yokungahoywa kwabavelisi abaninzi xa ...
Ukuba ifowuni yakho ilawulwa yi-Android 7.1 kuya kufuneka uyitshintshe ngo-2021 ewe okanye ewe
Enye yeengxaki abajamelene nazo abasebenzisi be-Android kukwahlukana, ingxaki encinci ...
I-Android 11 iqala ukufika kwi-Android TV
Ekuqaleni kukaSeptemba, uGoogle ukhuphe ingxelo yokugqibela ye-Android 11, inguqulelo efika kancinci ...
I-Android 11 ilapha kunye neendaba zayo ezinkulu ezili-11
por UManuel Ramirez yenzayo Iinyanga ze11 .
I-Android 11 ilapha emva kweenyanga zophuhliso kunye nokujonga kwangaphambili konjiniyela kwaye sihambe ntoni ...
Uluhlu olusemthethweni lweefowuni zeXiaomi eziza kuhlaziya kwi-Android 11
por UDaniPlay yenzayo Iinyanga ze12 .
UXiaomi wabelane ngamaqonga akhe asemthethweni iifowuni ezakuhlaziya kwi-Android 11 ukusuka ...
I-Android 11 ayizukubonisa umfanekiso wealbham esiyidlalayo kwiscreen sokutshixa
Inkqubo nganye yokusebenza kweeselfowuni ineendlela ezahlukeneyo zokwenza ngokwezifiso, kunye ne-Android yeyona iphumeleleyo ngumhlaba. Njengomsebenzisi we-Android ...
UGoogle uya kuthintela iifowuni nge-2GB ye-RAM ekusebenziseni ngokupheleleyo i-Android 11
UGoogle uqalile ukukhupha i-beta 11 ye-Android kwaye kwisikhokelo sokumisela isixhobo ityhila ...
I-Android 10 ifakwe kwizixhobo ezizizigidi ezingama-400
UGoogle wazisa iminyaka eliqela eyadlulayo iProble Treble, iprojekthi (eyenzelwe ukuba ijongwe) eyayifunwa nguGoogle ...
I-Ulefone S7 Go iya kubonisa i-Android Go (uHlelo lwe-Oreo)
Ngaba unokucinga nge-Android ngaphandle kweGoogle? U-Eelo angenza ukuba izaliseke
I-OnePlus 5 ayizukufumana okwethutyana uhlaziyo kwi-Android Oreo
Iimpawu ze-Android 8.1. I-Oreo incinci eyaziwayo ngabasebenzisi
UGoogle uqinisekisa ii-smartwatches eziza kuhlaziya kwi-Android Oreo
Uluhlu olupheleleyo lweefowuni ze-Samsung eziza kuhlaziya kwi-Android Oreo
IMotorola iqala ukukhupha i-Android Oreo phakathi kweMoto Z Play kunye neZ2 Play
I-Android Wear 2.6: Iindaba ezifika kuhlaziyo olutsha
I-Android 8.1 Oreo Isemthethweni! | Sikubonisa zonke iindaba zayo
I-Android 7.1.1 Nougat iza kwi-Samsung J5 (2016)